700,000 Facebook အသုံးပြုသူများကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုထဲသို့သွင်းထားခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ပါဘူးနှင့်လေ့လာမှု Third-party ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုမှဘာသာရပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
2012 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အဘို့, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 700,000 Facebook အသုံးပြုသူများစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုသူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်လူအများ၏စိတ်ခံစားမှုများကထိခိုက်ထားတဲ့အတိုင်းအတာလေ့လာစမ်းသပ်မှုတစ်ခု၌ထားကြ၏။ ငါအခန်း4၌ဤစမ်းသပ်မှုဆှေးနှေးခဲ့ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်ငါယခုတဖန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်စမ်းသပ်မှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုလေးအုပ်စုများထဲသို့သွင်းထားကြ၏အနုတ်စကားသည် (ဥပမာ, ဝမ်းနည်းဖွယ်) နဲ့ရေးသားချက်များကျပန်းသတင်းများ Feed တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောမှပိတ်ဆို့ခဲ့ကြတော်မူသောအဘို့ကို "အဆိုးမြင်စိတ်တွေလျော့ချ" အုပ်စု, အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားသည် (ဥပမာမင်္ဂလာ) နဲ့ရေးသားချက်များကျပန်းပိတ်ဆို့ခဲ့ကြတော်မူသောအဘို့ကို "Positive လျှော့ချ" အုပ်စု; နှစ်ယောက်ထိန်းချုပ်အုပ်စုများ။ "အအဆိုးမြင်စိတ်တွေလျော့ချ" အုပ်စုထိန်းချုပ်မှုခုနှစ်တွင်ရေးသားချက်များကျပန်းကို "အဆိုးမြင်စိတ်တွေလျော့ချ" အုပ်စုအဖြစ်ပေမယ့်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲတူညီသောနှုန်းမှာပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်။ "အအပြုသဘောလျှော့ချ" အုပ်စုထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ကအပြိုင်ဖက်ရှင်အတွက်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများ positive-လျှော့ချအခြေအနေကလူထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေမှဆွေမျိုးအနည်းငယ်နည်းပါးလာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားလုံးများနှင့်အနည်းငယ်ပိုပြီးအနုတ်စကား, အသုံးပြုခဲ့တဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင်သူတို့ကအဆိုးမြင်စိတ်တွေ-လျှော့ချအခြေအနေကလူအနည်းငယ်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားလုံးများနှင့်အနည်းငယ်နည်းပါးလာအနုတ်စကားလုံးတွေကိုမသုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သုတေသီစိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်၏သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; ထိုစမ်းသပ်မှု၏ဒီဇိုင်းနှင့်ရလဒ်များပိုမိုပြည့်စုံသောဆွေးနွေးမှုများအတွက်အခန်း4ကိုကြည့်ပါ။
ဤစာတမ်းသိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုထားထုတ်ဝေခဲ့ရုံရက်အကြာမှာ, သုတေသီများနှင့်စာနယ်ဇင်းနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးထံမှကြီးမားသောအော်ဟစ်ရှိ၏။ စက္ကူပတ်ပတ်လည်ဒေါသနှစ်ခုအဓိကအချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်: 1) သင်တန်းသားများကိုစံ Facebook ကဝေါဟာရများကို-of-service ကိုကျော်လွန်မဆိုသဘောတူခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ပါဘူးနှင့် 2) ကိုလေ့လာမှု Third-party ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုခံဘူး (Grimmelmann 2015) ။ ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲမှာကြီးပြင်းအဆိုပါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုဂျာနယ်တွင်လျင်မြန်စွာသုတေသနများအတွက်ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ရှားရှားပါးပါး "စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်စကားရပ်" ထုတ်ဝေရန်စေ (Verma 2014) ။ နောက်ဆက်တွဲနှစ်များတွင်ဒီစမ်းသပ်မှုပြင်းထန်သောငြင်းခုန်ခြင်းနှင့်သဘောထားကွဲလွဲတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ဆက်လက်သိရသည်, ဤစမ်းသပ်မှု၏ဝေဖန်မှုများမှောင်မိုက်အရိပ်သို့သုတေသနလုပ်ငန်းဒီလိုမျိုးကားမောင်း၏မရည်ရွယ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြပေမည် (Meyer 2014) ။ ဒါကတချို့ကုမ္ပဏီတွေကစမ်းသပ်ချက်ဤအမျိုးမျိုးပြေးရပ်တန့်မလာကြသူတို့မျှသာအများပြည်သူအတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းပြောနေတာရပ်တန့်ကြပြီစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲလည်း Facebook ကသုတေသနတစ်ခုကျင့်ဝတ်ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ဖန်တီးမှုမှဦးဆောင်ရှိစေခြင်းငှါ (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) ။